ရခိုင်မှာ တိုက်ပွဲတွေ ဆက်ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအပါအဝင် မနက်ခင်းသတင်းများ
ရခိုင်မှာ တိုက်ပွဲတွေ ဆက်ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအပါအဝင်...
12 ก.ย. 2562 - 10:52 น.
(၁) ရခိုင်မှာ တိုက်ပွဲတွေ ဆက်ဖြစ်နေ
တပ်မတော်နဲ့ မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ် ၃ ဖွဲ့ကြား ၁ လလောက် အပစ်ရပ်မယ်လို့ ကြေညာချက်တွေ ထုတ်နေပေမယ့် ရခိုင်ဘက်မှာတော့ တိုက်ပွဲတွေ ဆက်ဖြစ်နေပြီး ကျောက်တော်မြို့နယ် ဒက်ဖြူကျေးရွာနားမှာ လက်နက်ကြီးကျည် ကျရောက်ပေါက်ကွဲလို့ ရွာထဲမှာ နေထိုင်တဲ့ လင်မယား ၂ ဦး ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ပြောပါတယ်။
အမျိုးသမီးကတော့ ရင်သားကို ထိမှန်ခဲ့လို့ စိုးရိမ်ရတဲ့ အခြေအနေမှာ ရှိနေပြီး ဒဏ်ရာရသူ ၂ ဦးလုံးကို ကျောက်တော်မြို့နယ်ဆေးရုံမှာ ဆေးကုသမှု ခံယူနေရတယ်လို့ သူတို့ကို ဆေးရုံလိုက်ပါ ပို့ဆောင်ပေးတဲ့ ဖြူစင်မေတ္တာပရဟိတအဖွဲ့ တာဝန်ရှိသူ ကိုစိုးမိုးက ပြောပါတယ်။
ရွာသား ၂၅ ဦးကို စစ်တပ်က ခေါ်ယူသွားပြီး နောက်ပိုင်းမှာ ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ပြီး ဒီကနေ့ ညနေပိုင်းမှာ ရွာကို ပြန်ရောက်လာပြီဖြစ်တယ်လို့ ရွာသားတွေက ပြောပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ရသေ့တောင်မြို့နယ်နဲ့ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်ကြား သေကံခွဆုံရွာနားမှာ တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်ခဲ့သလို မေယုမြစ်ထဲမှာလည်း တပ်မတော်သားတွေ စီးလာတဲ့ စက်လှေ ၃ စီးကို ရက္ခိုင်တပ်မတော် (AA) က ကမ်းပေါ်ကနေ သေနတ်နဲ့ ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက် တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။
အဲဒီအတွက် အနီးအနားက ကျေးရွာသားတွေ ဘေးလွှတ်ရာကို ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရတယ်လို့ ရသေ့တောင်မြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ခင်စောဝေက ပြောပါတယ်။
ကျောက်တော်နဲ့ ရသေ့တောင်နယ်ဘက်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တာကိုတော့ အတည်ပြုချက် မပေးနိုင်သေးပေမယ့် မြောက်ဦးဘက်မှာတော့ လုံခြံရေးကားတန်း တစ်ခု မိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတယ်လို့ အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ် ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ စစ်ဦးစီးပထမတန်း ဗိုလ်မှူးကြီး ဝင်းဇော်ဦးက ပြောပါတယ်။
(၂) ရေရှိတဲ့ ဂြိုဟ်တစ်လုံးကို သိပ္ပံပညာရှင်တွေ ရှာတွေခဲ့
ကမ္ဘာနဲ့ သိပ်ကို ဝေးကွာလွန်းတဲ့ အလင်းနှစ် ၁၁၁ နှစ်ခရီး အကွာအဝေးမှာ ရှိနေတဲ့ ဂြိုဟ်တစ်လုံးမှာ ရေရှိနေတာကို နက္ခတဗေဒပညာရှင်တွေက ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အနေနဲ့ ရှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
လန်ဒန်က သုတေသီတွေက အဲ့ဒီဂြိုဟ်က ကမ္ဘာမြေဂြိုဟ်ထက် ၂ ဆ လောက်ကြီးပြီးတော့ အပူချိန်က သုညနဲ့ ၄၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကြားလောက် ပူတယ်လို့ Nature ဂျာနယ်မှာ ဖော်ပြပါတယ်။
အဲ့ဒီဂြိုဟ်ကို K2-18b လို့ အမည်ပေးထားပြီး နေစကြဝဠာရဲ့ ပြင်ပမှာ သက်ရှိတွေ ရှင်သန်နိုင်မယ့်ဂြိုဟ်လို့လည်း ကောက်ချက်ချထားပါတယ်။
လက်ရှိမှာ နေစကြဝဠာရဲ့ပြင်ပမှာ ဂြိုဟ်ပေါင်း ၄ ထောင်ကျော် ရှာဖွေတွေ့ရှိထားပေမယ့် အဲ့ဒီဂြိုဟ်မှာပဲ သက်ရှိတွေအတွက် လိုအပ်တဲ့ ရေ၊ အပူချိန်နဲ့ မာကျောတဲ့ ကျောက်စားမျက်နှာပြင်ရှိတာရှိဖြစ်ပြီး ရေငွေ့ရေရိပ်တွေ ရှိနေတာကို ရှာတွေ့ခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
သိပ္ပံပညာရှင်တွေကတော့ လာမယ့် ဆယ်စုနှစ်အတွင်း နေစကြဝဠာ ပြင်ပက ရာနဲ့ချီတဲ့ ဂြိုဟ်တွေဆီကို အာကာသ စူးစမ်းရေးယာဉ်တွေ ပစ်လွှတ်နိုင်ဖို့ မျှော်လင့်နေကြပါတယ်။
(၃) ဥရောပသမဂ္ဂကနေ No Deal နဲ့ နုတ်ထွက်မယ်ဆိုရင် ဖြစ်နိုင်ချေရှိလာမှာတွေကို ဗြိတိန်အစိုးရထုတ်ပြန်
ဗြိတိန်ပါလီမန်ထဲ ဘရက်ဆစ်အရေးဆွေးနွေးနေတဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် ဘောရစ်ဂျွန်ဆင်
လာမယ့် အောက်တိုဘာလကုန်ကျရင် ဥရောပသမဂ္ဂကနေ ကြားကားလသဘောတူညီချက် ဘာမှမရဘဲ No Deal နဲ့ ထွက်ရမယ်ဆိုရင် ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ အရေးပေါ်ကိစ္စတွေနဲ့ ဖြေရှင်းမယ့် အစီအစဉ် အသေးစိတ်တွေကို ဗြိတိန်အစိုးရက ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေလိုက်ပါတယ်။
Yellowhammer အော်ပရေးရှင်းလို့ ခေါ်တဲ့ အဲ့ဒီစာရွက်စာတမ်းတွေထဲမှာ သိသာတဲ့ ထိခိုက်ခံရမှုတွေ ဗြိတိန်ကို သက်ရောက်လိမ့်မယ်လို့လည်း သတိပေးထားပါတယ်။
ဗြိတိန်နဲ့ ပြင်သစ်နိုင်ငံကြားက ရေလက်ကြားကနေတဆင့် ကုန်စည်ဝင်တဲ့အမြန်နှုန်းက ၄၀ ကနေ ၆၀% ကြားအထိကို ကျဆင်းသွားမယ်၊ အဲ့ဒီလို ကျဆင်းတာဟာ ၃ လ ထက်မက အချိန်ကြာနိုင်တယ်လို့လည်း ခန့်မှန်းထားပါတယ်။
ဒါ့အပြင် စားသောက်ကုန်တွေ ဈေးတက်တာ၊ ဆေးနဲ့ ဆေးပစ္စည်း ရရှိနိုင်မှု ခက်လာတာတွေလည်း ဖြစ်မယ်လို့ အဲ့ဒီထဲမှာ တွက်ဆထားသလို နေရာ အတော်များများမှာ ဆန္ဒပြတာတွေ ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
(၄) တာလီဘန်တွေကို ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်မယ်လို့ သမ္မတထရမ့်ပြောပြန်
တာလီဘန်တွေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမယ့် အစီအစဉ်ကို ဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီးတော့ ရက်ပိုင်းအကြာမှာပဲ သမ္မတထရမ့်က အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေဟာ အာဖဂန်က တာလီဘန်တွေကို ပိုပြီးတော့ ပြင်းပြင်းထန်ထန် တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ ပြောပါတယ်။
"အမေရိကန်စစ်သားတစ်ယောက်နဲ့ တခြားအပစ်မဲ့ အရပ်သား ၁၁ ယောက်ကို သူတို့က သတ်ခဲ့တာကို သိခဲ့ရတဲ့နောက် ငြိမ်းချမ်းရေးစကားပြောမယ့် ကိစ္စကို ဖျက်လိုက်တယ်၊ အဲ့လို လုပ်တာကို အားပြနိုင်တာလို့ ထင်လိမ့်မယ်၊ တကယ်က သူတို့ အားနည်းနေတာကို ပြတာ၊ ပြီးခဲ့တဲ့ ၄ ရက်အတွင်းကပဲ သူတို့ကို အရင်ကထက် ပြင်းထန်တဲ့ တိုက်ခိုက်မှုတွေ လုပ်ခဲ့တယ်၊ ဆက်ပြီးတော့လည်း လုပ်သွားဦးမယ်" လို့ သမ္မတထရမ့်က ပြောပါတယ်။
ပင်တဂွန်စစ်ဌာနချုပ်မှာ 9/11 တိုက်ခိုက်မှု နှစ်ပတ်လည်နေ့ ကျင်းပတဲ့ အခမ်းအနားမိန့်ခွန်းထဲမှာ သမ္မတထရမ့်က ထည့်သွင်းပြောခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
နယူးယောက်က အောက်မေ့ဖွယ်နေရာမှာတော့ စုဝေးကြတဲ့သူတွေက World Trade Centre မြောက်ဘက်အဆောက်အဦးကို အကြမ်းဖက်သမားတွေက ပထမ လေယာဉ်နဲ့ တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာ တစ်မိနစ်ငြိမ်သက်ပြီးတော့ သေဆုံးခဲ့ရသူတွေကို ဂုဏ်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။
อัลบั้มภาพ ရခိုင်မှာ တိုက်ပွဲတွေ ဆက်ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအပါအဝင် မနက်ခင်းသတင်းများ